Inkqubo yamatyala eKlasi kwi-AOL iya kunceda uKhuseleko | Martech Zone
NgoLwesibini, Septemba 26, 2006 Douglas Karr
UCarlo kwi Iteknoloji Inqaku elimalunga nokuba ityala lesenzo seklasi liya kwenzakalisa njani kwaye lingancedi shishini. Andiqinisekanga ukuba uCarlo angavuma ukuba bekunjalo yakhe idatha ayiphathise i-AOL kwaye yakhutshwa nge-Intanethi. Uthatha into yokuba uGoogle noYahoo! ziyalandela kwaye lo ngumba 'wokukhangela'.
Ayisiyongxaki 'yokukhangela' konke konke, ngumcimbi 'woxanduva'. Kule mihla nakwesi sizukulwana, izaphuli-mthetho zithontelana kwi-intanethi ukuze zifake kwaye zisebenzise iinkcukacha zabantu ukuze zithathe ubunyani bazo ngeenjongo ezingekho mthethweni. Iinkampani ziphathiswe idatha yethu kwaye kufuneka ziyikhusele. I-AOL ayikhange nje ingayikhuseli, bayityhale ngaphandle apho nabani na anokuyifumana khona!
Ngokuphathelele kumagqwetha afumana yonke imali, ayisiyonto yokuba ngubani oyifumanayo. Imalunga nokuhlawulwa ngubani. Iinkampani azinabuntu, azinasazela, kwaye uxanduva abanalo kukwenza imali kubanini bazo. Ngenxa yoko, kuphela Indlela yokohlwaya inkampani kwaye ibenze batshintshe indlela kukuyimangalela ngenxa yemali engaphezulu.
Ndiyakholelwa kubungxowankulu kwaye ndiphikisana ngokupheleleyo nezimangalo ezingenamsebenzi. Ndikholelwa ekubeni kukho imithetho ekufuneka ipasisiwe ukuze ophulukileyo ahlawule zonke iindleko ezinxulumene nesuti engenantsingiselo. Kodwa oku akukho namnye kubo. Ukuba i-AOL iyehla nzima ngenxa yoku, ezinye iinkampani ziya kuqaphela kwaye zibeke amanyathelo afanelekileyo okuzikhusela kwimfihlo yethu.
Sihlawulela inkonzo yabo. Benza inzuzo kwidatha yethu. Kufuneka babenoxanduva lokuphendula.